“भो‘ट दिने जनता बाटै कु‘टिन थाले ज‘नप्रतिनिधी।:: Mero Desh
“भो‘ट दिने जनता बाटै कु‘टिन थाले ज‘नप्रतिनिधी।
Published on: ५ आश्विन २०७८, मंगलवार २३:१९
काठमाडौँ हिलाम्मे बाटो । बाटोभन्दा पनि धान रोप्नुअघि खेत हिल्याएको जस्तो । त्यहाँ एक ढाकाटोपी ढल्काएका, जुहारी कोटमा ठाँटिएका सुकिला मान्छे देखिन्छन् । तर, कसैले यी भलाद्मीको क,ठालो समातेका छन् ।यतिबेला उनको अनुहार मास्कले छोपिएको छ । शायद रातोपिरो भएको हुनुपर्छ ।”
कठालो स“मात्ने व्यक्तिको अनुहारमा भने आ“क्रोश छ । के यो आक्रोश यत्तिकै पैदा भएको होला ? ती व्यक्ति त्यसै आ”क्रो,शित भएका होलान् त के कुनै भलाद्मी व्यक्ति को क“ठालो समात्न उनी किन बाध्य भए ?यसका लागि उक्त
तस्वीरको अन्तर्यलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तस्वीर भन्दा पनि यसको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए को थियो, गत भदौमा ।तस्वीर र भिडियोसँगै प्रेम लामा नामक व्यक्तिले फेसबुकमा यसको भित्री कथा लेखेका छन् ।”
“उनी यसरी लेख्छन्, ‘यो तस्वीर मेलुङ गाउँपालिका केन्द्र जोरधारा छेउको हो । मेलुङ गा.पा. ३ मुकुनेबाट सिरियस बिरामी जनकबहादुर तामाङलाई उपचारका लागि काठ- माडौं लैजाँदै गरेको दृश्य हो यो । जहाँ एम्बुलेन्स जाने कुनै संभावना छैन, कार्यालय छेवै“मा समेत यस्तो हालत हुनु।
भनेको गाउँपालिकाको बेइज्जत मात्र नभई स्थानीय सर कारको उदासीनता र लज्जास्पद अवस्था देखाउँछ तस्वीर मा देखिएका एक चिरिच्याट्ट ढाकाटोपी र सेतो जुहारीकोट लगाउने राम्रो मान्छे गाउँपालि का अध्यक्ष नर“बहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।
केहीबेर अगाडि बिरामी बोक्ने व्यक्तिहरूले नरबहादुर श्रेष्ठ लाई बिरामी लिन आएको हाम्रो गाडी बाटोमा पहिरो हिलो मा फसेको छ । गाउँपालिका को डोजर ले सफा गरि दिनु पर्‍यो भनी फोन गर्दा ‘म चरिकोट छु । मैले बाटो सफा गर्न
भनिदिन्छु’ भने । तर, केही एकछिन पछि बिरामी बोक्ने हरू जोरधारा पुग्दा नरबहादुर श्रेष्ठ त्यहीं देखेपछि झुक्याए को र बाटो समेत सफा नगरिदिंदा त्यो बेलासम्म तीन वटा स्टेचरसमेत भाँचिएकोले आक्रोशित भई यो स्थिति सिर्जना हुन पुग्यो ।’”
“मेरो जन्मथलो मेलुङ गाउँपालिका । मेलुङको यो तस्वीर ले मलाई पनि तान्यो । वास्तवमा यो तस्वीरले लोकतन्त्र लाई गिज्याएको छ । संघीय शासन व्यवस्थालाई कुरीकुरी गरेको छ ।”“लोकतन्त्र आयो, संविधान निर्माण भयो राज्य संघीय प्रणालीमा गयो ।
हामी सर्वसाधारणलाई लागेको थियो, अब हाम्रो पालो आयो । अब हामीले चाहेको जस्तो शासन व्यवस्था हुनेछ । हामीले चाहेको व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नेछन् । हाम्रो सुखदुःख बुझ्नेछन् । हाम्रो जीवनयापन सजिलो बनाइदिनेछन् ।”
“किनभने त्यसबेला नेताहरूले हामी सर्वसाधारणलाई यस्तै सपना देखाएर कहिले आन्दोलन गर्न उक्साएका त कहिले भोट हाल्न लालायित बनाएका थिए ।“उनीहरूले हामीलाई यसरी सपना देखाएका थिए –
– गाउँ-गाउँसम्म विकासको लहर आउनेछ । बाटो बन्नेछ, घर-आँगनमा गाडी गुड्नेछ । सामान ढुवानी गर्न वा यात्रा गर्न धेरै हिंड्नुपर्ने छैन ।– घर-घरमा पिउनेपानीको धारो निर्माण हुनेछ । टाढाको खोला वा खोल्साबाट पानी बोक्नु पर्ने दिनको अन्त्य हुनेछ ।”
घर-घरमा बिजुलीको लाइन आउनेछ । घर-भान्सा झल मल्ल उज्यालो हुनेछ ।अब दुःखका दिन जानेछन् । समृद्धि को लहर आउनेछ ।”“हामीले नेतालाई विश्वास गर्‍यौं उनी हरूको कुरा मान्यौं । उनीहरूले जे-जसो भन्छ, त्यसै गर्‍यौं
। कहिले आन्दोलनमा हिंड्यौं । कहिले भोट दिने पंक्तिमा उभियौं । उनीहरूले चुनाव जिते । सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा लिए । तर, हाम्रो अपेक्षा पूरा भएन ।”“हाम्रो गाउँ जस्ताको तस्तै रहृयो । हाम्रो दुःख ज्यूँका त्यूँ रहृयो ।देश
बनाउँछु, गाउँ बनाउँछु भन्दै हिंडेका नेताहरू आफ्नो खल्ती भर्नतर्फ लागे । विकासको नाममा विनाश गरे । आफूलाई मनलाग्दी गरे । जसरी हुन्छ, जे गरेर हुन्छ पैसा कुम्ल्याउनतर्फ लागे । उनीहरूले जनतासामु गरेको वाचा बिर्सिए ।”
“स्थानीय तहका परिस्थिति र मनस्थिति बुझेका स्थानीय नेताहरूले गाउँ-समाज सुधारका कामहरू गर्छन् भन्ने लागे को थियो । तर, उनीहरू कामचोर र भ्रष्ट निस्किए । तर, यो झुटको खेती कहिलेसम्म टिक्छ सर्वसाधारणको धैर्यकहिले सम्म बाँकी रहन्छ ?
यस्ता झुट, कामचोर,भ्रष्ट जनप्रतिनिधिहरूको अब कठालो समातेर सोध्ने बेला भएको छ।”यसौ गरि ,बुटवलका मेयर शिवराज सुवेदीलाई मु’क्का प्र’हा’र गर्ने युवक नेकपा एमा ले कै कार्यकर्ता रहेको पाइएको छ ।”
“एमाले रूपन्देहीका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर सुवेदीलाई सोमबार पहिरो निरीक्षणका क्रममा बुटवल–३ ज्योतिनग रमा मु’क्का हा’न्ने युवक गणेश पंगेनी अनेरास्ववियु रुपन्देही जिल्ला कमिटी, सदस्य रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।”
“उनी लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलका विद्यार्थी हुन् ।उनी पहिरो प्रभावित क्षेत्र बुटवल३ ज्योतिनगरका बासिन्दा हुन् ।”“पहिरोले ज्योतिनगरवासी विस्थापित र असुरक्षित हुँदा स्थानीयहरु सरकार ले चासो नदिएका ले आ,क्रो,शित भएर उनले मु’क्का हा’ने’को बताएका प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।”